FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA KEESHOND - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Keeshond
'Ity ny sarin'i Keeshond, 5 taona, Remy. Tiany ny milalao fakana, milomano ary manohy mandeha lavitra . Tiany ny miaraka amin'ny olona sy ny alika hafa. Sambatra indrindra izy ireo satria ao anaty alika ary tsy te-hisaraka amin'ny tompony ela be. Tsara ny ahy mandritra ny andro fiasana fa mankahala ny ho tavela amin'ireo hetsika rehetra aho raha ao an-trano aho. Ny ahy tsy dia tsara toa an'ireo ankizy kely toa azy mitsambikina amin'izy ireo saingy tsy nobeazina teo akaikin'izy ireo izy, ary tsy nandany minitra vitsivitsy niaraka tamin'izy ireo mihitsy. Miaraka amin'ny ankizy 5 taona mahery, dia tsara toetra izy. '
'Izy ireo dia alika hendry, be finiavana ary mafy loha fa raha ataonao mahafinaritra ny fiofanana ho azy ireo ary manaraka ny torohevitry ny Dog Whisperer dia matetika izy ireo dia afaka mianatra fika na baiko ao anatin'ny minitra vitsy monja. Manosotra ny alikako indroa isan-kerinandro aho ary mbola mandatsaka be ihany. Miaina anaty toetrandro mafana aho na izany aza, noho izany ny ankamaroany angamba tsy handoavana mandavantaona toa ahy. Tsy manaratra azy isika satria mora tohina amin'ny masoandro ary mora mirehitra. Ny dobo kely an-tokotany any an-tokotany no ilaina mba hitazomana ny Keeshond ho faly mandritra ny ora maro mandritra ny fahavaratra. Mendrika izany ny fikolokoloana satria hanana ny alika tsara tarehy indrindra amin'ny namanao ianao ary ity no alika tsara indrindra nananako. '
Lisitry ny alika mifangaro Keeshond
Alika Barge Holandey
Ny Keeshond dia biby kely mifatotra miaraka amin'ny fitoviana mafy amin'ny razambeny, ny Samoyed . Ny masony dia salantsalany ary mainty ny lokony. Ny sofina dia mijoro, telozoro ny endrika ary avo eo an-doha. Ny rambony dia antonony ny halavany ary entina any ambadika. Somary lava ny savaivony ary mifanaraka tsara amin'ny karandohany. Ny tongotra dia toy ny saka, matevina ary boribory tsara. Ilay alika dia samy manana palitao lava lava sy mahitsy ary masiaka, izay tonga amin'ny aloky ny volondavenona misy tendrony mainty ary akanjo matevina sy matevina, izay crème na volondavenona fotsy. Mijanona lavitra ny vatana ny palitao.
Basset nanenjika sisin-collie Mix alika kely
Mpiara-dia amin'ny ankizy tena tsara, mavitrika, manan-tsaina, be zotom-po sy tia olona, ​​Keeshonden dia feno toetra. Afaka zarina hanao fampisehoana izy ireo. Tia sy sariaka ny Keeshond dia tia ny olon-drehetra ary mila tafiditra ao anatin'ny hetsika ara-pianakaviana. Io karazana io dia toetra tena izy izay mailaka mianatra haingana raha tsy miova ny tompony. Tokony hampiofanina amin'ny alàlan'ny fitarihana fitarihana malefaka, nefa hentitra sy milamina. Amin'ny ankapobeny dia tsara amin'ny biby hafa. hifanerasera tsara mba hisorohana azy ireo tsy ho voatokana na saro-kenatra. Keeshonden dia te-hiondrika ary mpiambina tsara satria fanomezana miavaka ho fampitandremana ny loza. Ampianaro azy ireo ampy, mba hijanonan'ny fikorohany aorian'ny hoditr'izy ireo voalohany. Tandremo sao misakafo be loatra, fa mora mihena ny Keeshond. Aza hadino ny mandray azy ireo a fitsangatsanganana entana isan'andro handao ny angovo ara-tsaina sy ara-batana, hisorohana ny fientanentanana tafahoatra, toy ny fihodinan'ny faribolana sy ny hafa olan'ny fitondran-tena . Keeshond izay mihodina amin'ny faribolana dia manana angovo be loatra ilainy handoroana, na ara-batana na ara-tsaina. Ho alikao foana mpitarika fonosana , mijanona ho mafy orina, matoky tena ary tsy miovaova. Omeo ny alika fitsipika tsy maintsy arahiny ary mametra izay misy azy ary tsy mahazo manao. Ny alika dia maniry ary mila azy io karazana filaharana eo amin'ny fiainany izany.
Haavony: Ny lahy 17 - 19 santimetatra (44 - 48 cm) ny vehivavy dia 10% latsaka.
Milanja: ny loharanom-baovao sasany dia 55 - 66 pounds (25 - 30kg), ny sasany kosa milaza fa 35 - 45 pounds (15 - 20 kg). Anontanio ny mpiompinao izay fenitra arahiny.
Mora voan'ny dysplasia amin'ny valahana, olan'ny hoditra ary aretim-po. Ao amin'ny Keeshonden sasany izay manana fangejana tsy marim-pototra, ny fanatanjahan-tena tena mitaky be loatra dia hiteraka lohalika maloto.
Tsy maninona ao amin'ny trano iray, na dia tokony hanana tokotany salantsalany aza farafaharatsiny. Keeshonden dia maniry ny toetrandro mangatsiaka izay tsy zakany tsara ny hafanana noho ny palitaony matevina.
Ity karazana ity dia mila raisina a mandeha isan'andro . Ho fanampin'izany, izy ireo koa dia hankafy fihazakazahana tsara amin'ny saha malalaka sy malalaka isan'andro. Ity karazana ity dia mihetsika ao anaty trano. Rehefa mihodinkodina anaty faribolana i Keeshond dia fambara izy fa mila fampihetseham-po manentana bebe kokoa. Jereo ny horonantsary misy fientanam-po Keeshond mihodina amin'ny faribolana .
ny halehiben'ny voalavo sy ny lanjany
Ny fikolokoloana dia tsy manahirana araka ny ampoizinao, fa ny fikosehana ny palitao lava isan'andro amin'ny borosy lava volo dia zava-dehibe. Borosio aloha ny voam-bary, avy eo atsangano amin'ny volo ny volo, apetaho amin'ny voam-bary, ary apetraho amin'ny toerany. Mandrosoa na shampooo maina raha tsy ilaina. Ny palitao matevina dia avoaka indroa isan-taona amin'ny lohataona sy amin'ny fararano.
Ny Keeshond dia manana fiaviana arctika. Tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, ny Keeshond dia fantatra ho 'alikan'ny vahoaka.' Ao amin'ny lalan-drany dia mihazakazaka ny ràn'ny Samoyed , Chow Chow , Spitz Finnish , Norkho Elkhound , ary Pomeranian . Tamin'ny fiandohan'ny Tolom-piavotana frantsay dia nanjary tandindon'ny antoko politika Patriot Holandey notarihin'ilay tia tanindrazana Kees de Gyselaer. Gyselaer dia nanana alika antsoina hoe Kees, izay nanome ny anarany ny karazany. Nijaly nandritra ny fotoana lava be ilay karazany avy eo. Nampahafantarin-dRamatoa Wingfield-Digby tany UK aloha izy ireo ary tsy nalaza intsony hatramin'ny 1920, rehefa tonga tany Etazonia. Nanjary fantatra amin'ny anarana hoe Doge Barge Holandey izy io, satria niasa toy ny fiambenana sy alika mpiambina amin'ny lakana, sambo ary toeram-piompiana. Ny Keeshond dia neken'ny AKC tamin'ny 1930.
Kalla the Keeshond puppy amin'ny 9 herinandro
Andriamatoa Jeeves, alika kely Keeshond 5 taona
Fletcher the Keeshond amin'ny 10 taona
Alika Keeshond olon-dehibe - Sary natolotry ny David Hancock
Amanda the Keeshond tamin'ny faha-15 taonany nandry tamin'ny tany niaraka tamin'ny mainty saka mijery ambany avy eo ambony seza fandriana
Zuza Punkt Widzenia miaraka aminy fako alika kely , sary natolotry ny Repoblika Tseky Kennel Re-Jan Moravia
Keeshond vavy Zuza Punkt Widzenia avy ao amin'ny kennel Re-Jan Moravia sy ny fako zanak'alika I .. Re-Jan Moravia
Interchampion Keeshond lahy Akimm avy amin'ny kennel Re-Jan Moravia
Hijery ohatra hafa momba ny Keeshond
Keeshond sary 1
Keeshond sary 2
Karazana Spitz Alemanina
pitbull mainty sy fotsy pitbull
volo fohy domba anglisy
mifangaro amin'ny lab sy weimaraner amidy
tanety omby volontsôkôlà sy fotsy